🥇 xisaabinta iyo muddada shaqada
Qiimeynta: 4.9. Tirada ururada: 745
Fiidiyowga xisaabinta iyo muddada shaqada
Dalbo xisaabinta iyo muddada shaqada
Waxaa jira ganacsi noocan oo kale ah oo xisaabinta iyo mudada shaqada ee shaqaaluhu ay yihiin halbeegga ugu weyn ee xisaabinta mushaharka, qiimeynta waxtarka, wax soo saarka. Sidaa awgeed, maareeyayaashu waxay abuuraan farsamo lagu hagaajiyo bilowga iyo dhammaadka shaqada, iyaga oo buuxinaya foomam gaar ah, laakiin marka ay timaaddo wada-tashiga, dhibaatooyinka kormeerka ayaa soo baxa. Waxaa jira labadaba halbeeg cayiman oo ku saabsan mudada waajibaadka shaqada iyo mudada dheeriga ah, taas oo lagu bixinayo iyadoo loo eegayo heshiiska shaqaalaynta iyadoo lagu kordhinayo heerka. Markuu takhasusle ku shaqeynayo meel fog, guriga ama shay kale, suurtagal maahan in la hubiyo waxa uu sameynayay maalintii oo dhan iyo in howlaha si wanaagsan loo qabtay maxaa yeelay teknoolojiyadda casriga ah ayaa u soo gurmanaya. Iyadoo la adeegsanayo xisaabinta bilaashka ah, dhammaan geeddi-socodka waxay u dhacayaan qaab elektiroonig ah, qaarkoodna waxay adeegsadaan internetka, kaas oo ballaadhinaya rajada isticmaalka freeware, isaga oo u adeegsanaya dhammaan goobaha waxqabadka. Waxaan kugula talineynaa inaad fiiro gaar ah u yeelato horumarka oo bixin kara habab isku dhafan oo otomaatiga ah si maalgashiga uu si dhakhso leh u bixiyo isla markaana soo noqoshada ay ka sarreyso.
Khabiiro ku takhasusay barnaamijyada USU waxay abuureen barnaamijyo meelo kala duwan oo ganacsi ah sanado badan, taas oo fahan siinaysa baahiyaha jira Barmaamijka horumarsan ee nidaamka softiweerka ee USU wuxuu noqdaa aasaaska abuurista mashruuc, maaddaama ay u oggolaaneyso hagaajinta waxyaabaha kujira isdhexgalka, waxay sameysaneysaa shaqeyn gaar ah oo ku habboon shirkaddaada. Maheysid xalka sanduuqa oo kugu qasbaya inaad bedesho qaab dhismeedka waqtiga shaqada caadiga ah iyo laxanka, taas oo macnaheedu yahay inaadan ku lumin doonin waqti inaad la qabsato qalab cusub. Barnaamijku wuxuu ku faanaa muddo tababar gaaban isticmaaleyaasha, xitaa haddii ay marka hore la kulmaan xalkaas oo kale. Khubaradayadu waxay ku sharaxayaan mabaadi'da aasaasiga ah, faa'iidooyinka, iyo xulashooyinka dhowr saacadood gudahood. Algorithms-ka ayaa isla markiiba la dejiyaa ka dib marxaladda hirgelinta, iyada oo la tixgelinayo nashaadaadka waxqabadyada, baahiyaha ganacsatada iyo shaqaalaha, taas oo kuu oggolaan doonta inaad qabato howlo adiga oo aan ka leexan xeerarka laguu qoray, yareynta khaladaadka. Xisaabinta waqtiga shaqada waxaa loo sameeyaa si otomaatig ah, sida ku xusan jadwalka gudaha ama xuduudaha kale.
Awoodda qaabeynta freeware ee USU Software kuma koobna oo keliya kormeerka muddada howlaha, isbeddelka shaqaalaha. Waxay u noqotaa xiriiriye dhammaan isticmaaleyaasha, oo siinaya xog-ururin casri ah, xiriiro, dukumiintiyo. Khabiir kasta wuxuu helayaa boos shaqsi oo gudanaya waajibaadkooda waqtiga shaqada, halkaasoo ay ka habeyn karaan nidaamka raaxada leh ee tabsyada iyo qaabeynta muuqaalka. Xisaabinta saxda ah iyo mudada shaqada, xafiiska iyo shaqaalaha fog, iyo waliba moduleka raadraaca ee lagu rakibay kombiyuutarada. Isla mar ahaantaana, madaxa ama madaxa waaxdu wuxuu helaa tirakoob diyaarsan ama warbixin, taas oo ka tarjumeysa dhammaan macluumaadka ku saabsan howlaha shaqaalaha, oo ay ku jiraan howlaha la dhammaystiray, saacadaha shaqada ee lagu qaatay tan. Nidaamka xisaabinta wuxuu la socdaa mudada dhaqdhaqaaqa iyo caajisnimada, sameynta muuqaal, muuqaal garaaf midab leh. Ka qayb qaadashada horumarinteena xagga xisaabaadka waxaa loola jeedaa inaan helno kaaliye la isku halleyn karo oo ku saabsan dhammaan arrimaha.
Awoodda loo habeeyo arjiga codsiyada macaamiisha ayaa ka dhigaysa ikhtiyaarka ugu fiican iyada oo la adeegsanayo otomaatigga hawlo kala duwan.
Waxaan siineynaa macaamiisheena fursad ay ku doortaan waxyaabaha shaqeynaya, ee lagu hirgeliyo iyadoo la beddelayo xulashada xulashooyinka ku jira is-dhexgalka. Qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka laconic-ka ee menu-ku wuxuu u oggolaanayaa barista barnaamijka waqti yar oo aan la kulmin dhibaatooyin hawl maalmeedka. Warbixinta shaqaaluhu waxay ku dhacdaa qaab fog oo macno ahaan waxay u baahan tahay dhowr saacadood, ka dib waxaa bilaabmaya marxalad gaaban oo isbarasho ah.
Qiimaha barnaamijka waxaa xukumaya waxyaabaha la soo xulay oo la xushay waana lagu kabi karaa hadba sida loogu baahdo.
Hawl socod kasta, algorithm gaar ah oo ficilada ayaa loo qaabeeyey, taas oo u oggolaan doonta iyaga in lagu dhammaystiro waqtiga iyo cabasho la'aan. Muddada isbeddelka takhasuska waxaa lagu duubay oo lagu soo bandhigayaa joornaalka elektarooniga ah si toos ah, oo fududeynaya waxqabadyo dheeri ah oo waaxda xisaabinta ah. Xisaabinta mushaharka, canshuuraha, qiimaha adeegyada iyo badeecadaha ayaa ka dhaqso badan iyadoo la adeegsanayo qaaciddada elektiroonigga ah ee wax kasta oo murugsan. Xisaabinta barnaamijka ee howlaha shaqaalaha fog waxaa lagu fuliyaa iyada oo ku saleysan diiwaangelinta joogtada ah ee ficilada, codsiyada la codsaday, dukumiintiyada. Uma baahnid inaad si joogto ah ula socoto kormeerayaasha shaqaalaha, waxaad si fudud u furi kartaa shaashadda muddada loo baahan yahay, waxaa la sameeyaa daqiiqad kasta. Falanqaynta iyo tirakoobka lagu soo bandhigay warbixinnada diyaar-garowga ah ayaa gacan ka geysanaya qiimeynta horumarka hadda ka socda hirgelinta qorshaha, iyo isbeddellada haddii loo baahdo.
Hoggaamiyeyaasha, ku-aaminidda xukunka barnaamijka USU Software, waxay awood u yeelan karaan inay dadaal dheeraad ah u fidiyaan aagagga sida ballaarinta iskaashiga, helitaanka la-hawlgalayaasha, macaamiisha.
Kaliya kuwa ka diiwaangashan keydka macluumaadka ayaa awood u leh inay adeegsadaan arjiga, geliyaan lambarka sirta ah iyo soo galida aqoonsiga markasta oo ay soo galaan. Ma jirto wado meesha looga saari karo dhibaatooyinka qalabka, laakiin kaydinta joogtada ah ayaa kaa caawinaysa inaad ka soo kabato xogtaada.
Si aad u hirgeliso arjiga, waxaad u baahan tahay kombuyuutarro fudud oo la adeegsan karo, iyada oo aan lahayn nidaamyo gaar ah oo xaddidan. Haa, waad maqashay si sax ah, looma baahna in wax la rakibo ama la iibsado kombiyuutar mooyee. Xisaabinta iyo muddada shaqada waa hab loo baahan yahay loona baahan yahay. Adeegsiga barnaamijka xisaabinta softiweerka ee USU waxaad had iyo jeer hubin doontaa shaqaalahaaga iyo waajibaadkooda waqtiga shaqada.